Waajibaadka Jumlada Culus ee Waxsoosaarka Eyga Leashka iyo alaableyda | Kudi
Waajibaadka Culeyska Culus ee Eyga Xadgudubka
1. Xadhig jar jaban waa xadhig ballaadhan oo fidsan. Naqshaddani waxay kuu oggolaaneysaa inaad xarigga dib ugu rogto si habsami leh, taas oo si wax ku ool ah uga hortagi karta xarigga eeyga ka soo wareegida iyo guntinta. Sidoo kale, qaabkani wuxuu kordhin karaa aagga xoog ku qaadka xadhigga, wuxuu kadhigi karaa xadhigga jarjarku mid la isku halleyn karo, una adkaysan kara xoog jiidasho badan, hawlgalkiina ka dhigaya mid fudud oo wuxuu kugula dhaqmayaa si raaxo leh.
2.360 ° Caadiga aan xadka lahayn ee xadhigga eeyaha laga celin karo ayaa hubin kara in eygu si xor ah u ordo iyada oo laga fogaanayo dhibaatada ka dhalanaysa xarigga. Qabashada ergonomic iyo xakamaynta kahortaga isdabamarinta waxay bixisaa dareen qabasho raaxo leh.
3.Here waa mashiinka wax lagu rito ee wasakhda daabacan ee qaabkeedu fudud yahay iyo 1 duub oo ah baco qashinka caagga ah oo gacanta lagu hayo Waa gacmo-la'aan oo ku habboon. Waxay kuu ogolaaneysaa inaad si dhab ah ugu raaxaysato raaxada socodka.
U dir Su'aalo Wadahadal Hada
Shayga MAYA .:
Madow iyo Caddaan ama Caado
ABS + TPR + SS + Nylon
20/30 / 50kg
Xirmo / Logo:
Faa'iidada Shaqada culus ee culus ee looxa eeyaha
Habka qufulka lagu kalsoonaan karo wuxuu hubiyaa in xariggu u fidin karo si habsami lehna u laaban karo Riix badhanka jejebiinta si aad u jejebiso, oo batoonka badhanka u hor dhig si aad uhesho xadhigga. Haddii aad rabto inaad soo celiso xaaladda bilaashka ah, batoonka gadaal u riix. Kaliya si aad ugu rogto oo aad u rogto suulkaaga oo keliya, fudud oo aamin ah.
Sawirka Xirmooyinka Eeyga ee Shaqada Culus
Ma waxaad tahay warshad ama shirkad ganacsi?
Waxaan nahay warshad ku takhasusay soo saarista wax soo saarka xayawaanka muddo 20 sano ah.
2.Sidee loo sameeyaa rarka?
RE: Bad ama hawo amarada tirada badan, gaarsiinta degdega ah sida DHL, UPS, FEDEX, EMS, TNT oo ah amarro tiro yar.
Haddii aad wakiilo maraakiib ah ku leedahay Shiinaha, waxaan badeecada ugu diri karnaa Wakiilkaaga Shiinaha.
3.Waa maxay waqtigaaga hogaamintu?
RE: Waa qiyaastii 40 maalmood sida caadiga ah. Haddii aan alaab ku hayno keydad, waxay noqon doontaa 10 maalmood.
4. Miyaan heli karaa muunadda bilaashka ah ee alaabadaada?
RE: haa, waa caadi inaad hesho muunada bilaashka ah fadlan adigu iska bixi qarashka dhoofinta.
5: Waa maxay habka lacag bixintaadu?
RE: T / T, L / C, Paypal, Kaarka amaahda iyo wixii la mid ah.
6. Waa maxay nooc ka mid ah xirmooyinka alaabtaada?
RE: Waa caadi in xirmada la habeeyo.
7.Maan booqan karaa warshaddaada ka hor inta aan la dalban?
RE: Sure, ku soo dhawow inaad soo booqato warshaddayada. Fadlan ballan horay naga sii waqti hore.
Raadinta baaritaankaaga ee ahama Birta eey ahama
Hore: Dheeraad ah ee loo yaqaan 'Bungee Lugta Eyga'
Leashka Dib Looga Noqon Karo Eeyaha Yar Yar
Xadhig Ey Jebin Jaban
Koofiyad Ey Eeg ah
Dheeraad ah ee loo yaqaan 'Bungee Lugta Eyga'
Oxford Dog la habeeyo hagaajin karo
Waajibaadka Culus ee Eyga Xadgudubka